Raha ny lisitra ofisialin'ireo kandida navoakan'ny CENI androany 19 martsa kosa indray dia ny distrikan'Ambatondrazaka no nahitana kandida betsaka indrindra satria miisa 19 ireo handray anjara. Ny any amin'ny distrikan'Ambatomainty sy ny distrikan'Ihorombe no nahitana kandida vitsy indrindra,kandida miisa roa avy.
Eo amin'ny miralenta kosa indray dia 15 % ny taha-pandraisan'anjaran'ireo vehivavy nirotsaka ho kandida solombavambahoaka. Miisa 126 ny isan'ireo kandida vehivavy.
Ny zoma 22 martsa izao no hanatanterahina ny antsapaka ahafantarana ny laharan'ireo kandida anaty bileta tokana.Eny anivon'ny OVEC isaky ny distrika no hantanterahina io antsapaka io.